Wararka Maanta: Isniin, Oct 11, 2021-Madaxweyne Biixi "Hablaha waanu difaacaynaa ganacsigooda iyo xoriyadoodaba"
Madaxweynaha ayaa sheegay in dumarku ku dulmanyihiin, dhaqanka Soomaalida, isla markaana, uu xukuumadiisa kasiin kariwaayay qaybtii ay ku lahaayeen cadaadis bulshada kaga yimid awgii.
"Dumarku way ku dulmanyihin marka aynu wax maamulayno, dhaqankeenu wali hablaha wuu riixayaa, sadkii ay ku lahaayeen xukuumadayda waan kasiin kari waayay waayo umada ayaa igaga hortimid, qaar badan oo is dhisay oo mutacalimiin ah ayaa jooga oo mudnaanta raga lasiiyo lama siiyo" ayuu yidhi Biixi.
Madaxweynaha ayaa sheegay in raga qaarkii ay weerar ku yihiin, dumarka ganacsiyada leh, isagoo sheegay in ka madaxweyne ahaan uu difaacayo isla markaana, uu garab taaganyahay.
"Waxa soo baxay hablo badan oo reer Somaliland ah oo mashruucyo badan oo ganacsigu ka midyahay samaystay, waxa soo baxday oo la dareemayaa in uu ragu hablaha ka garbinayo xataa in ay soo galaan baayac mushtarka, halkan waxaan u imid in aan isgarab taago oo waajibku ifarayo oo dastuurku i farayo" ayuu yidhi Biixi.
"Hablaha iyo ragu way u simanyihiin sharciga, caafimaad, baayacmushtar tacliin iyo xoriyada, haday danbi galaan qaranka ayaa xaq u leh in uu qabto, sida inanku danbi u galo ayuunbay inantuna u gali kartaa, maaha nin suuqa jooga in uu yidhaahdo aniga danbiga ka jaranaya, oo ragaba kuma dhacee ma hablaha loosoo qoslayaa, waar hablaha waan difaacaynaa" ayuu hadalkiisa ku daray Biixi.
Madaxweynaha Somaliland ayaa is garabtaagay Layla Ibraahin Cumar, oo maalin kahor warbaahinta ka sheegtay in nin ganacsade ahi uu qorshaynayo in uu burburiyo meherad laga cunteeyo laguna caweeyo oo ay ku leedahay degmada Koodbuur ee Hargaysa.
Madaxweynaha ayaa markii ay soo gaadhay cabashada Layla, kulan deg deg ah la qaatay Layla iyo madaxda hay'ada amaanka, waxaana xabsiga la dhigay ninka ganacsadaha ah ee ay Layla kasoo cabatay.